Sawirkii Fadeexada Ahaa Ee Wax Badan Caddeeyay, Talada Adag Ee Ay Carragher Iyo Henry Siiyeen Pochettino & Ceebta Dul Hoganaysa MNM - Laacib
HomePSGSawirkii Fadeexada Ahaa Ee Wax Badan Caddeeyay, Talada Adag Ee Ay Carragher Iyo Henry Siiyeen Pochettino & Ceebta Dul Hoganaysa MNM
Sawirkii Fadeexada Ahaa Ee Wax Badan Caddeeyay, Talada Adag Ee Ay Carragher Iyo Henry Siiyeen Pochettino & Ceebta Dul Hoganaysa MNM
Theirry Henry iyo Jamie Carragher oo haatan door falanqeeyenimo kaga shaqeeya kanaalka BT Sports ayaa talo siiyay tababaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Mauricio Pochettino iyaga oo u sheegay inuu iskaga dhaqaajiyo kooxdaas.
Paris ayaa xalay guuldarro 2-1 ah kala kulantay Manchester City balse eedaymaha fashilkaas ayuusan inta ugu badan la kulmin tababaraha ree Argentina waxaana bedelkiisa masuuliyada inta badan dusha laga saaray saddexleyda weerar ee Lionel Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe.
Saddexleydaas weerar ayaa si sahlan lagu arki karayay inaysan wax shaqo ah ka qabanaynin garoonka iyaga oo dhex soc-socday halka ay xiddigaha kale ordayeen kulanka oo dhan si ay ula tacaalaan kubad haysashada badan ee Man City.
Arrintaas ayaa markale caddaynaysa in PSG ay tahay koox aysan tababarayaashu u maamuli karin shaqsiyaad isla weyn oo aan doonayn inay sida xiddigaha kale u shaqeeyaan waana dhib lamid ah midkii soo qabsaday Unai Emery iyo Thomas Tuchel.
Si kastaba, Carragher ayaa u sheegay Pochettino in haddii uu shaqada Man United ee lala xidhiidhinayo helo isla berri ku biiro halka Henry uu sheegay inaan toddoba ciyaaryahan oo kaliya oo difaacanaya Champions League lagu qaadin.
Carra ayaa yidhi “Haddii uu helo fursada uu ugu biirayo Manchester United, anigu isla berri ayaan bixi lahaa. Dhab ahaan waan bixi lahaa sababtuna waa saddexdaas (Mbappe, Neymar iyo Messi)”
Henry ayaa isaguna yidhi “Haddii aad doonayso inaad Champions League ku guuleysato, toddoba ciyaaryahan oo kaliya kuma difaacan kartid.”
“Macquul maaha, aniga waxba igama gelin cida aad tahay. Ciyaartoyda garabaha daafaca ayaa noqonaya kuwo la fashiliyo, kooxda ku guuleysanaysa Champions League waa in saddexdeeda weerar ay kubadda wajahaan.”
Halkan Ka Daawo Sawirka Muujinaya Shaqo La’aantii MNM Ee Kulankii Xalay